Rotika sy potika amin’ny politika… | NewsMada
Rotika sy potika amin’ny politika…
Par Taratra sur 16/01/2017
Fahantrana lalina sy maharitra. Tsy hita hotanisaina… Takina amin’ny governemantan’ny ady izay vahaolana. Tsy hoe efa mahazatra ny fahantrana. Tena mila hetsika sy imasoana haingana: ahoana, mby aiza, rahoviana?
Mahatonga ireo trangan-javatra miseholany tato ho ato ny fahasahiranana? Na vao mainka mahalalina sy mampitombo ny fahantrana ireny fisehoan-javatra ireny. Mila tsy hain’ny sasany avahina izay marina, tsara, mety…
Eo, ohatra, ny fitsaram-bahoaka: saika mandeha ho azy, mahahenika ny faritra maro… Tsy hita mazava izay tena vahaolana maharitra. Vitan’ny fampahatsiahivana ny lalàna sy fampitandremana ve ny raharaha?
Na ireo mpampihatra lalàna toy ny mpitandro filaminana aza, ohatra: mahavalalanina. Misy mampiasa na mifanondro basy avy hatrany amin’izay tsy mahafaly azy. Mitompo teny fantatra ho manana ny marina hatrany?
Na tsy azo ahitsy na toherina fa be basy sy baoty… Nifampitifitra ny samy zandary tany Anjozorobe, ny 7 janoary; nifandramatra ny polisy sy ny miaramila teny Ambohidahy, ny 10 janoary… Efa niseho ny toy izany tamin’ny taon-dasa.
Efa voa ny fomba fijery na simba ny kolontsaina? Tsy misy intsony izay fanajana ny hasin’ny maha olona, ny fitandroana ny aina, ny fifampitsinjovana… Tsy hita na tsy misy lanjany intsony izay iombonana sy mampiombona?
Ireo vakoka aza, may saika isan-taona: ny rova teny Antongona, Ambohidratrimo, Ambohimalazabe… Manginy fotsiny ny lapan’i Manjakamiadana, Andafiavaratra, ny Radio Madagasikara teo aloha mbamin’ny tahirim-bakoka tao aminy.
Endrika ivelany ireo, fa eo ny fahapotehan’ny toe-tsaina,
toe-po, toe-panahy… Vokatry ny fahapotehana anaty ny ety ivelany. Miara-dalana amin’izany ny tsy fanarahan-dalàna, ny kolikoly, ny varo-tanindrazana…
Saika tratran’ny fahapotehana izay avokoa ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga? Tsy hita intsony izay tokony ho filamatra, fakan-tahaka, hanoro lalana, mpitari-dia… Na misy fa takona, vitsy, tsy afa-manoatra firy…
Raha mbola te ho vanon-ko firenena isika, mila atrehina ny fahantrana lalina sy maharitra amin’ny toe-karena, toe-tsaina, toe-panahy. Efa rotika sy potika amin’ny politika?